Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 2 bilood 1 saacad ka hor #1816
Duuliyayaal salaaman! Waan ka xumahay haddii tan la weydiiyay. Waxaan raadinayay 1/2 saac waxaanan imid madhan.
Weligey ma soo dejinin oo aan rakibin fayl diyaarad ama muuqaal ah. Go'aansaday inaan iskudayo Boeing 737-MAX8 Multi-Livery-kan FSX & P3D. Waxaan haystaa FSX. Windows 10. Waan soo degsaday faylka. Maxaan sameeyaa? Ma jiraa bog leh tilmaamo rakibayaal iwm?
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D Bisha 1 4 todobaad ka hor #1817
Kaliya raac waxa uu sheegayo, khadka khadka hoose ku kaydi ka dibna halkaas ayey ku imaan doontaa meeshii ay tiraahdid halka aad ka heli doonto waxay si otomaatig ah u keydin doontaa.
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D Bisha 1 4 todobaad ka hor #1820
Pilot Hello - Waan soo degsaday oo aan ku rakibay B737 Max 8 dhib la'aan. Si kastaba ha noqotee marka aan bilaabo FSX Daabacaadda Steam oo leh 'Fly Inside VR', diyaaraddayda midkoodna matoorradooda ma socdaan. Marka waxaan isku dayey bilowga gacanta isla markaana makiinadaha inooma soo noqdeen. Waxaan ku bilaabayaa matoorka anigoo isticmaalaya CTRL E, wax la mid ah. Way cabbi doonaan laakiinse ka leexan maayaan. Si ka duwan taa marka aan furo FXS SE oo aan Fly Gudaha ku jirin, matoorrada diyaaraduhu waxay bilaabaan iyada oo aan wax laqaban. Wax dhib ah kuma lahayn illaa aan soo dejinayo Max 8. Ma jiraa qof caawin kara oo aan ka ahayn masruufka diyaaraddaan quruxda badan?
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D Bisha 1 4 todobaad ka hor #1821
Waan ka xishoonayaa inaan uga jawaabo arrinteyda laakiin sabab aan la garaneyn awgeed, markaan bilaabo FSX dayuuraddayda oo dhan shidaal ma leh! Marka taasi waxay ahayd arrinta! Shidaalka shidaalka kahor intaadan qaadan! Hayso maalin wanaagsan oo hawo ku hayso baalasheeda hoostooda
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D Bisha 1 4 todobaad ka hor #1822
Ma isku dayday inaad soo afjarto duulimaadka oo ku keydiso shidaal buuxa ka dibna dib u bilowdo?
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray TH1Flyer.
Boeing 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D Bisha 1 2 todobaad ka hor #1842
Hi Guys, Tip, waxaan helay taxadarka dib-u-bilaabista max737-800.M Hubso in taayirka taraku uu udhaxeeyo 2-3 deggow.
Sababta oo ah kuma bilaabi doonto V1or Vr .Sidoo kale u caawi dadkan qaar.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.219